Falastiin - ALinks
Maqaallada ku saabsan Falastiin
Socdaal la’aan Visa Gobolka Palestine
April 27, 2020 Karuna Chandna Palestine, safarka, fiisada
Falastiin waxay caan ku tahay soo jiidashada dalxiiska. Maaddaama sanad walba dad badan oo soo booqda ay halkan u yimaadaan si ay u arkaan meelo qurxoon oo dalka ka mid ah. Badda Dhimatay waa barta ugu hooseysa ee dabiiciga ah ee Dunida. Waxay ku taal Falastiin oo keliya. Marka, haddii aad
April 27, 2020 Maitri Jha shaqo, Palestine, safarka
Ku kobcinta geedaha saytuunka, xeebaha quruxda badan, iyo 650 goobood oo dhagaxa lagu soo saaro, falastiinku waa xaqiiqo soo jiidasho dalxiis oo weyn. In kasta oo ay jirto dhammaan xiriirka adag ee ay la leedahay Israa'iil. Juqraafi ahaan Falastiin waxay ku taal qaybta galbeed ee Aasiya. Tan kaliya maaha
Nidaamka waxbarasho: Falastiin
March 6, 2020 Karuna Chandna Palestine, dugsiga, waxbarasho
Nidaamka waxbarasho- Nidaamka waxbarasho ee Falastiin waxaa gacanta ku haya Wasaaradda Falastiin. Halkan iskuulada guud ahaan waxay u qaybsan yihiin wiilal, gabdho. iyo iskuulaadka wax lagu barto. Isdiiwaangelintu waa ku dhawaad ​​80 boqolkiiba. Heerarka akhris-qorista ayaa sidoo kale aad ugu sarreeya halkaas. Iskuulada ku saleysan
Waqtiga ugu Fiican ee lagu booqdo laguna baadho Falastiin
February 13, 2020 Antika Kumari Palestine, safarka
Waqtiga ugu wanaagsan ee lagu booqdo Falastiin Waqtiga ugu wanaagsan ee lagu baadho laguna soo booqdo waa min Maarso ilaa Meey iyo laga bilaabo Sebtember ilaa Noofembar. Markay hawadu diiran tahay, qoraxda tahay badanaana qalalan tahay. Xilliyada xagaaga ee Juun ilaa Ogosto waa caan
Cisbitaalada ugu Fiican Palestine
February 13, 2020 Shubham Sharma caafimaadka, Palestine, safarka
Daryeelka caafimaadka ee Falastiin wuxuu ka kooban yahay cosbitaalo gaar loo leeyahay iyo kuwo aan gaar loo lahayn. Hoos waxaad ka heli kartaa liiska qaar ka mid ah cosbitaalada ugu fiican Falastiin. Liiska isbitaalka waxaa loo siiyay seddexdan gobol inta badan: Bariga Qudus, Daanta Galbeed, iyo Marinka Gaza. marmar,
Meelaha ugu Fiican ee Aad ku Sii Joogto Falastiin
February 13, 2020 Maitri Jha hotels, Palestine, safarka
Falastiin waxay ku taalaa bariga Mediterranean-ka taas oo aan ka ahayn qaybta casriga ah ee Israail iyo dhulalka reer Falastiin ee marinka Qaza ee ku teedsan xeebta Badda Mediterranean-ka iyo Daanta Galbeed ee ku taal aagga galbeed ee